Apple na-agbakwunye ọkwa mara metụtara nnweta: Sady | Esi m mac
Apple na-agbakwunye ọkwa mara metụtara nnweta: Sady
Apple na-elekwasị anya na ịnweta kọmputa ya maka ndị nwere nkwarụ na nke a ka edere ya ruo mgbe ebighi ebi, mana taa ọtụtụ ekele karịa na akụkụ ụfọdụ maka ọganihu na teknụzụ. Mụ okorobịa si Cupertino doro anya na ndị ọrụ niile ga-enwerịrị otu ụlọ ọrụ na nhọrọ maka ojiji na ngwa ha nke ụdị mmadụ niile ga-eji, ma ha nwere nkwarụ ma ọ bụ na ha enweghị. Nke a yiri ntakịrị mgbagwoju anya iji mepụta abụghị nke ukwuu mgbe anyị lere anya n'ụzọ zuru ezu na nhọrọ nke ngwa Apple gosipụtara ma anyị nwere olile anya na nhọrọ ndị a ga-aga n'ihu na-abawanye ma melite oge.
Ihe kachasị mma bụ na ị hụrụ n'onwe gị Apple ọhụrụ ad na o nwere na ọwa YouTube maka nkeji ole na ole:
Na nkenke, ọ bụ ihe ọzọ karịa mgbasa ozi agbakwunyere na ngalaba akọwapụtara nke ha nwere na ha ukara website ebe anyị nwere ike ịchọta nkọwa nke a mma nnweta ma chọpụta atụmatụ nnweta niile ejiri jikọtara na ngwaahịa gị. Dị ka ọ na-ekwu na weebụ na mbido:
Teknụzụ kachasị ike n'ụwa bụ nke onye ọ bụla, gụnyere ndị nwere nkwarụ, nwere ike iji. Workrụ ọrụ, gosipụta ihe okike gị, kwukọrịta, kwado onwe gị ma nwee ọ yourselfụ. Ọ bụ ya mere na anyị anaghị emepụta ngwaahịa maka ụfọdụ ndị, anyị anaghịkwa emepụta ngwaahịa maka ọtụtụ. Anyị na-echepụta ha maka mmadụ niile.
Nke a na ime ihe na ohere nke nnweta bụ ihe bịara doo anyị anya mgbe onye ìsì na-eso ụzọ nke pọdkastị anyị na-eme n'abalị Tuesday ọ bụla, Emiliano Madrid, nke anyị na-ekele si ebe a, gwara anyị uru nke akụrụngwa Apple n'ihe gbasara nnweta maka onye kpuru ìsì. Ọ bụrụ na ị na-achọ pọdkastị na iTunes ị nwere ike ịchọta ya na spreaker anyị hapụrụ gị njikọ ahụ ebe a, ị ga-eju anya dịka anyị nọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Apple na-agbakwunye ọkwa mara metụtara nnweta: Sady
Ngwa kachasị mma iji Ogwe aka
Agbanye chaja maka Macbook Pro ọhụrụ pụtara ịzụta chaja na nkwụnye iche